Cosmopack 2019-nhau-HC Kuisa Asia
Nguva: 2021-04-13 Hits: 15
Semutungamiri muindasitiri yekupakira, isu tine basa rekudzora tsoka yedu yekabhoni kubatsira kurwisa rimwe rematambudziko makuru echizvarwa chedu - shanduko yemamiriro ekunze. Isu edu echinangwa zvinangwa zvinosanganisira kudzora mhedziso Scope 1 uye Scope 2 CO2e emissions ne20%.
Chikwata chine ruzivo mukugadzirwa dhizaini kutungamira iwo maitiro ekupakata bhizinesi nezviuru zvetsika dhizaini kesi.
Pakati pekushanda kwedu, uye mukati medu rese rekutengesa, isu tinoramba tichiita nhanho huru mukuderedza tsoka yedu yezvakatipoteredza. Isu zano redu rinovakira pane iko kufambira mberi, kumisikidza kunyange yakakwira zviyero zvekudzora gasi yekupisa gasi, kudzikira kwemarara uye kushandiswa kwemvura, uye kutsvaga zvinhu zvedu nenzira ine hunhu uye ine mutoro nenzira inogoneka.
HC Packaging inodada nehunhu hwayo hwekushandira uye kuzvipira kwedu kuona kudzikama kwenharaunda uko isu nevatengi vedu tichigara nekushanda, uye uko zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa. Isu tinoshumira nharaunda idzodzo kuburikidza nehurongwa hwekupa masimba, mari nemari nezvibereko, uye nekuzvipira, kuita zvakanaka munharaunda.
Muna 2020, HC Packaging vazvipiri vakapa anopfuura maawa chiuru kune zvikonzero zvemuno, kubva pakupa chikafu kuvakuru, rutsigiro rwemari kuvasikana vaviri vechikoro muHunan, China, kurongedza nekupa mabhuku kuvadzidzi vanoshaya, uye nezvimwe zvakawanda.
Kupesana neyechinyakare peturu-base base inki, soy based ink inofungidzirwa kuve yakanyanya kugarisana nharaunda, inogona kupa akajeka mavara, uye inoita kuti zvive nyore kudzokororazve-bepa.
Copyright © 2021 - 2026 HC Kavha.
Wedzera: O 9B, Lo Cn15, Duong So 4 Kcn Rwiyo Kupfuura 3 P Phu Tan, TP Thu Dau Mot Tinh Binh Duong, Vietnam